सुनको माने |	सुनको माने |
सुनको माने फरक भएको पशु थिम्ड अनलाइन स्लट खेल हो. यो बेलायत स्लट मिसिन मुक्त अनलाइन जुवा खेल NextGen विकास छ. खेलाडीहरू यो स्लट प्ले रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै समय र सुविधा मा. यो समीक्षा पढेर थप जान्न.
एक बेलायत स्लट मिसिन मुक्त खेल जंगली घोडे बारे
यो अनलाइन बेलायत स्लट मिसिन मुक्त जुवा खेल जंगली घोडा बारेमा सबै छ. तपाईं पशु थिम्ड स्लट प्ले मन भने, त्यसपछि यो तपाईं को हित को महत्वपूर्ण हुनुपर्छ. यो अनलाइन क्यासिनो स्लट प्रकृति गरेको उपहार संग धनी छ, पृष्ठभूमिमा दृश्यहरु एक विस्तृत परिदृश्य को निर्वाचकगण जस्ता, पहाड र बादल आकाश.
त्यहाँ छन् 10 paylines,3पङ्क्ति र5यो स्लट मा रील. के तपाईं ठूलो पुरस्कार दिनको प्रतीक छ, र ती तपाईंले कम पुरस्कार कमाउन भनेर. ठूलो मूल्य को प्रतिमा कालो र सेतो घोडा समावेश, एक पहाड र एक रूख.
तपाईं रील तिनीहरूलाई मेल गर्दा कम पुरस्कार प्रदान ती प्रतीक मानक खेल कार्ड समावेश. यी नियमित क्यासिनो स्लट खेलाडीहरू गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रतीक हो, को एक जस्तै, जे, K, Q,9र 10 प्रतिमा.
सुनको माने संग विजेता
यो बेलायत स्लट मिसिन निःशुल्क अनलाइन क्यासिनो जुवा खेल मा विजेता भएको रील मा मिल्दो प्रतीक रही समावेश. तर, त्यहाँ विजेता को आफ्नो संभावना बढावा गर्न मद्दत दुवै जंगली र स्क्याटर प्रतीक हो, र क्रमशः बोनस सुविधाहरू सक्रिय.
जंगली प्रतीक एक स्वर्ण माने जंगली घोडा प्रतिमा छ. यो प्रतीक को रील हरेक अन्य प्रतीक बदल हुनेछ, एक रजत हर्सेसहोइ प्रतीक को अपवाद संग. यो यस स्लट को स्क्याटर प्रतिमा प्रतिनिधित्व र तपाईं रील मा प्रतीक को एक नम्बर मिलेन जब बोनस राउन्ड ट्रिगर हुनेछ.
शुल्क Spins बोनस गोलो
रील को या त दुई ध्रुवीय प्रतीक लैंडिंग द्वारा 2,3वा4तपाईं फ्री Spins राउन्ड सक्रिय हुनेछ. तपाईं बीच कमाउन हुनेछ2र6प्रक्रिया मा नि: शुल्क spins. निःशुल्क spins तपाईं प्रतीक अप मेल गर्न थप अवसर दिन हुनेछ, र यसरी एकदम आफ्नो भुक्तानी बढावा.
अनियमित मा ट्रिगर कि एक ध्रुवीय रन सुविधा पनि छ. यो बेलायत स्लट मिसिन मुक्त क्यासिनो जुवा खेल को एक RTP छ 96.96%, आफ्नो भुक्तानी 100 wager £ प्रति-स्पिन मा प्रत्येक जितको लागि £ 96,96 हुनेछ अर्थ. तपाईं इन्टरनेट जडान संग कुनै पनि उपकरणबाट यो स्लट प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, र आफ्नो पीसी र Android / iOS मोबाइल उपकरणहरूमा प्ले समावेश.